Inye Ahụmịhe Onye Ọrụ Na-agbanwe agbanwe na HTML5 | Martech Zone
A na-ekewa ahịa ahịa ekwentị karịa ka ọ dị na mbụ, ka oge na-aga, ọ nwere ike ịkpa mba karịa.
Ọhụrụ nchoputa nke comScore Inc. ekpuchi ikpeazụ nkeji iri na ise nke 2012 na-ekpughe na gam akporo nọgidere na-enwe ọnọdụ ya dị ka ndị kasị ewu ewu na OS na mobile ohere. 53.4% ​​nke ngwaọrụ mkpanaka na-agba ọsọ ugbu a na gam akporo os, nke a na-anọchite anya ịrị elu 0.9% site na nkeji iri na ise gara aga. Apple iOS nwere ikike 36.3% nke ngwaọrụ mkpanaka niile, mana ahụgoro ibu na oge a, yana mmụba nke 2% site na nkeji gara aga. Uru Apple dị ka ọnwụ BlackBerry, ebe ngwaọrụ a bara uru naanị na 6.4% nke ndị ọrụ ekwentị nwere ọgụgụ isi, nke bụ n'ezie ọnwụ 2% site na nkeji nke atọ. Oghere ndị ọzọ bụ ndị egwuregwu pere mpe dịka Windows, Symbian, na ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ ndị gosipụtara gam akporo dị ka ike kachasị na oghere mkpanaka, agbanyeghị, aghụghọ. Ndị ọrụ iPhone na-etinye aka na ecommerce karịa ndị ọrụ gam akporo na-eme. Ọzọkwa, ndị ọrụ smartphone abụghị otu agbụrụ. Ọtụtụ ngwaọrụ na-agba ọsọ na OS a, ngwaọrụ ọ bụla dịgasị iche na nha ihuenyo na njirimara ndị ọzọ. Ọbụna iOS nke Apple, ruo ugbu a, na-enye agbanwe agbanwe n'ofe ngwaọrụ, ọ dị ka ọ na-aga ụzọ gam akporo, yana iPhone 5 nwere nha ihuenyo dị iche na ndị bu ya ụzọ. Site na ọtụtụ ngwaọrụ ọhụrụ nke nhazi dị iche iche na nha ihu njikere maka igba egbe, yana sistemụ arụmọrụ ọhụụ dịka gam akporo na Ubuntu, edoziri ịbanye oghere. N'ihi ya, ọ ga-esiwanye ike ịzụlite ngwa ọdịnala nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ofe ngwaọrụ.
Nke a bụ nnukwu ihe ịma aka nye ndị na-ere ahịa na-anwa ịnye ahụmịhe ndị ahịa na-agbanwe agbanwe site na ngwa ngwa ha. Omume nke imepụta ngwa ọdịnala na asụsụ ala nke ngwaọrụ abụghị naanị ịba ụba ọrụ ahụ, kamakwa ọ na - eduga n'ọtụtụ nghọta na emeghe dị iche iche na ngwaọrụ. Ọdịiche dị na nhazi ngwaọrụ na-agbada ahụmịhe onye ọrụ nke ukwuu.
Ya mere, olee otu anyi si edozi nsogbu a?
HTML5. Iji HTML5 dị ka ikpo okwu maka ngwa mkpanaka na-enye nsonaazụ anya na arụmọrụ dabara na ngwaọrụ niile: Android, iOS, na ọbụna ihe nchọgharị weebụ nke ọdịnala. Nkwado vidiyo na mgbasa ozi, koodu dị ọcha, nchekwa ka mma - ndị a niile uru nke iji HTML5.
Na-eji HTML5? Gịnị kpatara ya ma ọ bụ gịnị kpatara ya?
Tags: content Marketinghtml5m-azụmahịaMobile ahịamobilembadamba